Fifidianana filohan’ny FMF: hisokatra amin’ny 4 septambra ny filatsahan-kofidina | NewsMada
Fifidianana filohan’ny FMF: hisokatra amin’ny 4 septambra ny filatsahan-kofidina
Nambaran’ny Me Raherimanana Lala, filohan’ny vaomieram-pirenen’ny fifidianana ny baolina kitra (Ceni nationale), tamin’ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, omaly teny Tanjombato, fa hotanterahina ny 27 oktobra ho avy izao, ny fifidianana ny ho filoha hitantana mandritra ny efa-taona, ny FMF.
Efa nampahafantarina izany ny teo anivon’ny federasiona iraisam-pirenena (FIFA) sy ny federasiona malagasy, ary tsy nisy nitsipaka na nametraka olana. Araka izany, misokatra manomboka ny 4 septambra 2018, ny fotoana fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ho an’ireo kandidà rehetra, tsy maintsy manaraka ireo fepetra voalazan’ny lalam-pifidianana. Tsy maintsy mihoatra ny 21 taona ary latsaky ny 70 taona, ny kandidà ho filohan’ny federasiona, ary atolotry ny ligy telo. Manana fandaharanasa, tsy maintsy vitaina ao anatin’ny efa-taona, hitantanana ny federasiona. Mila taratasy manamarina fa efa nanana andraikitra tao anatin’ny tontolon’ny baolina kitra ary olona tsy mbola voaheloka teo anivon’ny fitsarana na efa nigadra. Apetraka iray volana mialoha ny fotoam-pifidianana ny antontan-taratasin’ireo hifaninana ho filohan’ny federasiona. Hamoaka ny lisitra ofisialin’ireo kandidà, nahafeno ny fepetra kosa ny ceni nationale, ny 14 oktobra, ho avy izao, aorian’ny fandinihana ny taratasin’ireo mpifaninana tsirairay. Manana telo andro kosa ireo kandidà tsy voaray hanaovany fitarainana.
Ligy tsy nahavita fifidianana
Nohararaotin’ny filohan’ny Ceni nationale koa ny nilazana ny zava-misy mahakasika ireo ligim-paritra telo, tsy mbola nahavita ny fifidianana dia i Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany ary Bongolava. Ho an’ity farany, efa tontosa ny latsa-bato na tao anatin’ny ady saritaka aza, noheverina ho efa milamina. Haverina amin’io volana septambra io kosa ny an’ireo ligim-paritra roa hafa ka kandidà tokana no hofidina izay nahafeno ny fepetra dia Rarison Hilarion, ho an’i Matsiatra Ambony ary Andrianirina Angelo, ho an’ny Vatovavy Fitovinany. Tsy nahazo rariny mantsy ireo kandidà hafa nanao fitarainana, rehefa nodinihina ny antontan-taratasin’izy ireo. Marihina fa nandefa taratasy tany amin’ny Fifa ireo kandidà ireo, ka nisy mihitsy ny fandefasan’ny federasiona iraisam-pirenena, olona nijery ifotony ny olana ka tonga tamin’ny fanendrena ny Ceni vaovao, hitantana ny fifidianana. Nomarihin’ny Me Lala fa tsy mahasakana ny firosoana amin’n’ny fifidianana ny ho filohan’ny federasioina ny tsy mbola fahavitana ny an’ireo ligy roa ireo, raha toa ka mbola misy sakana tsy hahatanteraka izany.